Abatyeleli bacofa phi kwiBhlog? | Martech Zone
Kudala sisebenza kuhlobo olutsha lweMartech ixesha elide. Sisenayo imiqobo ekufuneka siyoyisile njengoko siguqula ubeko lwangoku lube yindlela yokusebenzisana ekulula ukuyisebenzisa kubathengisi ukuze bafumane kwaye baphande ukuthengwa kwetekhnoloji elandelayo.
Olunye lolona vavanyo lukhulu silwenzileyo silungiselela yayikukususa ifom yokukhangela eyakhelweyo (savavanya ukukhangela kweWordPress kunye nokhangelo olwenziwe nguGoogle) sayifaka iAlgolia, ukukhangela njengesisombululo senkonzo esibonelela ngokujonga kwangaphambili komfanekiso kunye nokuzenzekelayo. Uya kubona apha ngezantsi ukuba intshukumo ibiphumelele-ivelisa ukubandakanyeka okuninzi, ikonyusa ukujonga kwethu amaphepha kutyelelo ngalunye, kunye nokunciphisa amaxabiso ethu okubuyisa.
Ngaphandle kokusebenzisa kubahlalutyi, Kubalulekile ukuba silandelele apho abasebenzisi bethu bacofa khona kwaye siqinisekise ukuba basebenzisa ibhokisi yethu yokukhangela. Ukufezekisa loo nto, safaka ukusetyenziswa I-Egg Crazy. I-Crazy Egg ibonelela ngeembonakalo ezine ezizodwa onokuzenza nakweliphi na iphepha lesiza sakho-kunye nethuba lokuvavanya unxibelelwano lweselfowuni ngokunjalo.
Ukutsalwa kweqanda eliPhezulu
I-Crazy Egg Heatmap
I-Crazy Egg Confetti
Lo ngumboniso weendwendwe ezintsha (ezibomvu) xa kuthelekiswa nokubuyela (ezimhlophe). Iingxelo ze-confetti ziya kuphula kwakhona iselfowuni, ithebhulethi, inkqubo yokusebenza kunye nolwazi lokusombulula.
I-Crazy Egg Iscrollmap
Sinomsebenzi ekufuneka siwenzile kule-kubonakala ngathi indawo yethu ephambili ibandakanyiwe, kodwa iindwendwe azisiboni isizathu esinyanzelayo sokuskrolela ezantsi. Siza kusebenza ekunikezeleni ezinye iikholamu zolwazi kunye nolwahlulo lodidi lwezithuba ezitsha.
tags: ialgoliaukukhangela ibhlogcofa ngaphezuluImephu ye-confettiiqanda eliphambeneyocrazyeggimephu yobushushuliweyoImephu yescrolmUphando lwezoPhandouphendlo olubonakalayo
Umsebenzi ovela kuMama wasekhaya
Nov 11, 2007 ngo-3:55 PM
Ukuphawula lelinye lamacandelo enza ukuba iibhlog zisebenze kakhulu kodwa uhlala ubona abantu becima izimvo okanye bengakhuthazi iindwendwe ukuba zihlomle. Ngokuqinisekileyo uya kufumana isuntswana le-spam kodwa kukho i-plug-ins ye-spam yokuphawula esebenza kakuhle kum.
Ndicinga ukuba ndizamile ukufaka i-Crazy Egg okwethutyana emva kodwa andinathamsanqa, inokuba lixesha lokuba ndiphinde ndihambe ndicinga.
Nov 11, 2007 ngo-6:26 PM
Ngokuqinisekileyo kunjalo! Ndenze uhlalutyo lokuphawula kunye nefuthe kwibhlog yam kwaye ndafumanisa ukuba ukuphawula sesona sixhobo sam sikhulu sokutsala abafundi.
Ndizamile ukufaka iClickHeat kwaye andikwazanga ukuyifumana ukuba isebenze kodwa iCrazyEgg ibonakala iqhuba kakuhle.
Nov 14, 2007 ngo-9:22 PM
Enkosi ngokuthumela olu lwazi. Ndiza kujonga iQhaqa eliphambeneyo. Ewe, ndiyavuma ukuba ukufumana izimvo kwiblogi kunomdla kakhulu. Andizange ndicinge ngayo ngeblogi yam ngaphambili. Qhubeka uthumela ulwazi olukhulu oluluncedo kwabanye!